ငါတို့ သည်လည်း ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြ၏။ အထံတော်၌ကျက်စားသော သိုးစုလည်းဖြစ်ကြ၏။
ဘန်ကောက်ခရစ်ယာန်မိဿဟာယ (Bangkok Christian Fellowship) နှင့် ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော် (Bangkok Christ Church) တို့၏သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်ကို ပြုစုကြရခြင်းသည်၊ ဘုရားရှင်၏အကြံတော်တွင်ပါဝင်ရာ ဖြစ်ရပ်တခုဟုယုံကြည်ပါသည်။ အသင်းတော်တွင် ဥက္ကဌတာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ သော ဦးအောင်မြချိန်၏ ရူပါရုံလည်းဖြစ်ပါသည်။ အသင်းတော်၏နောက်ခံအကြောင်းရင်းတို့ကိုဘော်ပြထားသည့်ကဏ္ဍတွင် ရည်ညွှန်းထားသည့်အတိုင်း၊ အသင်းတော် ၀င်များတို့သည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ခေတ္တလာ ရောက်နေထိုင်ကြသော၊ အာဂန္တု၊ ဧည့်သည်များဖြစ်ကြပါသည်။ လူများစုကလည်း၊ လူငယ်လူရွယ်များဖြစ်ကြပြီး၊ ဘ၀အခြေ အနေအရ၊ မကြာခဏနေရာထိုင်ခင်း ပြောင်းရွေ့ ကြရသူများဖြစ်ကြပါ၍ ဤအသင်းတော်အကြောင်းချင်းရာတို့ကို အတိအကျမသိကြပေ။ သို့ရာတွင် ဘုရားရှင်၏ကျေး ဇူးတော်ကြောင့် အသင်းတော်သည်၊ တရားဝင်၊ ရပ်တည်နေပြီး၊ ဆောင်ရွက်ရာအမှု တော်တို့ ကို တက်ညီလက်ညီ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ သို့ ပါ၍ ၀င်ထွက်ဆက်သွယ်ပါဝင်နေကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ မိသားစုများအပေါင်းတိုိ့သည် ဤအသင်းတော်၏သမိုင်းကို သိမှတ်လိုကြပေမည်။ သိမှတ်သင့်ကြသည်လည်း ဖြစ်ပါ၍ အကျဉ်းချုပ် မော်ကွန်းတင်၊ ပြုစုထားမှုသည် လိုအပ်သော အဓိကအချက်တခုဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားရှင်၏အလိုတော်၊ အကြံတော်အရ၊ အဆင့်ဆင့်ရောက်ရှိကြမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပါဝင်မိဿဟာယဖွဲ့ကြမည့်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ အသင်းတော်ဝင်များ၊ ဤအသင်းတော်တွင်ပင် နာမတော်ကို ၀န်ခံမင်္ဂလာယူခဲ့ကြသောသူများ၏အနာဂတ်တွင် ဤသို့မင်္ဂလာယူကြဦးမည့်သူများအတွက်၊ ဤအကျဉ်းချုပ်အသင်းတော် သမိုင်းငယ်သည်၊ တန်ဘိုးရှိစာတမ်းတခုဖြစ်ရမည်မှာ မလွဲပါပေ။
ဤအသင်းတော်ဖြစ်ပေါ်လာရန် ကျေးဇူးတော်နှင့် နှစ်အဆက်ဆက်ပို့ဆောင်တော်မူခဲ့သောဘုရားရှင်သည်၊ ဆက်လက်၍ ဤအသင်းတော်ဝင်တိုင်း တို့ အပေါ်သို့ ဆထက်တပိုး၊ ကောင်းကြီးမိုဃ်းသွန်းလောင်းတော်မူပါစေသော။
၂၀၀၇ ခုနှစ်အသင်းတော်နေ့ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းစည်းဝေးအပြီးတွင် အမှတ်တရ ရိုက်ကူးထားသော
ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော်၏ အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဧည့်သည်ဆရာတော်များ
အကြင်အရပ်၌ လူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်ငါ၏နာမကိုထောက်၍စည်းဝေးကြ၏။ ထိုအရပ်၌သူတို့အလယ်မှာ ငါရှိသည်။
အသင်းတော်၏နောက်ခံနှစ်မျိုးရှိသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ ပဌမနောက်ခံမှာ၊ ဓမ္မကြောင်းဆိုင်ရာနောက်ခံ၊ ဒုတိယနောက်ခံမှာ လောကကြောင်းဆိုင် ရာနောက်ခံ၊ ဟူ၍ခံယူနိုင်ကြပါသည်။ ဓမ္မကြောင်းဆိုင်ရာနောက်ခံဆိုရာ၌၊ အသင်းတော်ဟူသည်၊ ဘုရားရှင့်အကြံတော်အလိုတော်အားဖြင့်သာ ပေါ်ထွက်ရစမြဲဖြစ်ပါ သည်။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းအဆင့်ဆင့်မှာ၊ ဘုရားရှင်၏ခေါ်တော်မူသံကိုကြား၍၊ လောကအခြအနေ ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးထဲမှ၊ ခေါ်တော်မူသံကိုသိမှတ်လျက် လျှောက်သူများ သည်၊ ကျား - မ မရွေး၊ အဆင့်အတန်းမရွေး၊ လူမျိုးမရွေး၊ အချင်းချင်းလက်တွဲကာ၊ စုရုံးလျက်၊ ဘုရားရှင်ကို ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုအမှုတော်ဆောင်လေ့ ရှိကြပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ လူ့ ဆန္ဒအားဖြင့် မဲခွဲကာ အဖွဲ့ အစည်းတည်ထောင်မှုမျိုးမဟုတ်ဘဲ၊ လက်တဆုတ်မျှသော လူစုလေးဖြစ်စေ၊ မြေကြီးပေါ်တွင်သဘောတူကြလျက် စုဝေးဆုတောင်း ကြရာ အလယ်တွင် ဘုရားရှင်ကြွလာရပ်တည်တော်မူခြင်းဖြင့် သိုးထိန်းတော်၏ ထိန်းကျောင်းခံသိုးစု၊ ဦးခေါင်းဖြစ်တော်မူသော ခရစ်တော်၏ ခန္ဓာတော်ကိုသရုပ်ဆောင် သော အသင်းတော်ဖြစ်ရပါသည်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံ၊ လောကဒေသ တနေရာရာတွင်၊ ထိုသို့ သရုပ်ဆောင်သော အသင်းတော်စုကလေး၊ သေးဖွဲသည့် အစည်းအရုံးကလေး ဖြစ်သော်လည်း၊ ဘုရားရှင်လှုပ်ရှားပါဝင်နေသည့်သန့် ရှင်းခြင်းသရုပ်၊ ခရစ်တော်၏တမန်တော်များကို ယုံကြည်ခြင်းကိုခံယူသောသရုပ်၊ လောကတခွင်လုံးတွင် ထိုသို့ တည်ရှိနေသော အသင်းတော်စုများနှင့် တစပ်တည်းဖြစ်သောသရုပ် တို့ ရှိပေသည်။ ဤသည်တို့ ကား၊ အသင်းတော်အစစ်အမှန်တိုင်း၏ ဓမ္မကြောင်းဆိုင်ရာ နောက်ခံ ဖြစ်ပေသည်။
လောကကြောင်းဆိုင်ရာ နောက်ခံဆိုရာ၌ နေရာ၊ ဒေသ၊ လောကအခြေအနေ အမျိုးမျိုးထဲတွင် တည်ရှိသောတပည့် တော်စု၊ ဘုရားရှင်၏ နာမတော် ကို ဝန်ခံထားသော လူတို့ ၏ အဖွဲ့ အစည်းကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ထိုသို့ ဆိုရာ၌ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ သို့ ရောက်ရှိလာသော ခရစ်ယန်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ မိသားစုများကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ အလုပ်တာဝန်အရ ဘန်ကောက်မြို့ သို့ ပြောင်းရွှေ့ လာကြသောသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားနေရာမှ အဆင့် မြင့်ပညာ၊ ဘွဲ့ လွန်ပညာတို့ ကိုလေ့ လာသင်ယူရန် ဘန်ကောက်သို့ ရောက်ရှိလာသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တက္ကသိုလ်ပညာဘွဲ့မရသေးသော်လည်း၊ ဘန်ကောက်တွင် ဆီလျော်ရာ ပညာသင်ကြားရန် ရောက်ရှိလာသူများ၊ စားဝတ်နေရေးအတွက် တိုင်းခြားဝင်ငွေရရန် သင့် တော်သည့် အလုပ်ရှာဖွေလာသူများ၊ စသည် ဖြင့် ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော်ဝင်တို့ ၏ လောကကြောင်းဆိုင်ရာ နောက်ခံအမျိုးမျိုးလည်း ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ်ကြီးတွင် ပါဝင်သောအသင်းတော်များမှ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် တိုင်းခြားဘန်ကောက်မြို့ တွင် မိခင်အသင်းတော်နှင့် နီးစပ်ရာ ဝတ်ပြုရန်အသင်းတော်ကို ရှာဖွေယင်း၊ ဘန်ကောက်ခရစ် တော်အသင်းတော်အား ဆက်သွယ်ကာ အသင်းဝင်ဖြစ်လာကြပါသည်။ ၎င်းပြင် ဘုရားရှင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘန်ကောက်ရောက်မှ ခရစ်တော်အသင်းတော်ကို မိတ်ဆွေများနှင့် လိုက်ပါလာယင်း၊ ခရစ်တော်၏ နာမတော်ကို ဝန်ခံလာသူများလည်း ရှိပါသည်။ အချို့ မှာ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာပြီး၊ အပေါင်းအသင်းများကြောင့်မသမာသောနည်းဖြင့် ဝင်ငွေရှာရန် ကြိုးပမ်းယင်း၊ အဘမ်းအဆီးခံရကာ အကျဉ်းကျနေရာမှ အသင်းတော်၏အကျဉ်းထောင်သာသနာ၊ ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းနှင့် ထိတွေ့ ၍ နောင်တနှင့်နာမတော်ကို ဝန်ခံ၊ မင်္ဂလာယူ၊ ပြောင်းလဲလာသူများ၊ ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော်၏ သာသနာလှုပ်ရှားမှုများကြောင့်သင်းဝင်သူများဖြစ်လာသူ များလည်း ရှိပါသည်။ အသင်းတော်၏ ဤသမိုင်းအကျဉ်းချုပ် နောက်ပိုင်းကဏ္ဍများတွင်လည်း ဆက်လက်၍ဘော်ပြထားသည်ကိုတွေ့ မြင်ဘတ်ရှုနိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါ သည်။ အသင်းတော်ဖြစ်ပေါ်မလာမီ သမိုင်းနောက်ခံအနေနှင့် ရှေ့ပိုင်းဖြစ်ရပ်အချို့ ကို ဤတွင်ဖေါ်ပြဘို့ လိုပါသည်။ ဤဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းဟူ၍ ဖြစ်ပေါ်မလာ မီ နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်လောက်က ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြေငြိမ်းပြီး နောက်ပိုင်းခေတ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှပဂ္ဂိုလ် မိသားစုအချို့ တို့ သည် ဘန်ကောက်သို့ တာဝန်အရ ရောက်ရှိ လာသောအခါ၊ မြန်မာစကားသုံးလျက် ဝတ်ပြုရာအသင်းတော်များမရှိသေး၍ နီးစပ်ရာ အင်္ဂလိပ်စကားသုံးသော ဝတ်ပြုရာအသင်းတော်တို့ တွင် သွားရောက်ဝတ်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ ယခုစာရေးသူကိုယ်တိုင် မိသားစုနှင့် ဘန်ကောက်သို့ပြောင်းလာရာ၊ နှစ်ခြင်းထုံးတမ်းဝင် အသင်းတော်တပါးဖြစ်သည့်ဆူခွန်ဗစ် လမ်းသွယ်အမှတ် (၂) ရှိ ကရာနီအသင်းတော်တွင် ပုံမှန်သွားရောက် ဝတ်ပြုလေ့ရှိခဲ့ ပါသည်။ ၎င်းအသင်းတော်တွင်ပင် ကုလသမဂ္ဂနှင့် ဆက်စပ်သည့် အဖွဲ့ ၊ အမေရိကန်အသံလွှင့် အစီအစဉ်အ ဖွဲ့ ၊ မြန်မာလေကြောင်းကုမ္ပဏီ၊ စသည်ဖြင့်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ တို့ တွင် တာဝန်ယူကြသော မြန်မာနှစ်ခြင်းခရစ်ယန်မိသားစုများလည်း အတူတကွ ၎င်းအသင်းတော်တွင် ပါဝင်ဝတ်ပြုရုံမက၊ အသင်းတော်၏ ပေးအပ်ရာတ်ာဝန်တို့ ကိုလည်း ထမ်းဆောင်ခဲ့ ကြပါသည်။ ထိုမှတဆင့်ဝတ်ပြုသူမြန်မာများ ဦးရေတိုးလာရာတွင်၊ မြန်မာစကား အားဖြင့်သီးသန့် ဝတ်ပြုချိန်သတ်မှတ်ခါ ကိုးကွယ်ခဲ့ ကြပါသည်။ ကချင်အမျိုးသား သိက္ခာတော်ရဆရာ မရန်ယော အား၊ ၎င်းအသင်းတော်တွင် မြန်မာစကားသုံးဝတ် ပြုချိန်အတွက် တာဝန်ပေးခြင်းခံခဲ့ ရပါသည်။ သို့ နှင့် အကျဉ်းဖေါ်ပြရလျှင် မာရ်နတ်၏ဗြူဟာကြောင့်မြန်မာစကားပြောဝတ်ပြုသူများအား ကရာနီဗိမာန်တော်တွင် ဝတ်ပြုခွင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီး၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၃၁)ရက်ညကို နောက်ဆုံးထား၍ နေရာရွှေ့ပြောင်းထွက်ခွါသွားကြရန် သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းခံခဲ့ ကြရပါသည်။ သို့ ရာ တွင် ဘုရားရှင်သည် ကိုယ်တော်၏သိုးစုကို စွန့် ပစ်တော်မမူဘဲ ကိုယ်တော်အား ဝတ်ပြုနိုင်ကြရန်နေရာကို တနင်္ဂနွေတပတ်ကလေးပင်မလွတ်၊ လမ်းပြပို့ ဆောင်တော်မူ ခဲ့ပါသည်။
(Bangkok Christian Fellowship)
" ၁-၁-၂၀၀၁ မှ ၁၀-၈-၂၀၀၈ ထိ "
ယောဟန် ၁၆း၂
သင်တို့ ကို တရားဇရပ်မှာ နှင်ထုတ်လိမ့် မည်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့ သည် တနင်္ဂနွေနေ့ ဖြစ်သည်အတိုင်း ဆူခွန်ဗစ် လမ်းသွယ်အမှတ် (၂) ရှိ ကရာနီဗိမာန်တော်တွင် နံနက်ဝတ်ပြုရုံ သာမက၊ နှစ်၏နိဂုံး နှင့် နှစ်သစ်မကူးခင်၊ သန်းခေါင်ဝတ်ကို မြန်မာစကားပြော ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့်စုရုံးကိုးကွယ်ခြင်းပြုခဲ့ ကြပါသည်။ ဘန်ကောက်ခရစ်တော် အသင်းတော်၏ နောက်ခံခေါင်းစဉ်ပါ ကဏ္ဍတွင် ဘော်ပြခဲ့ သည်အတိုင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ် စကားပြောနှစ်ခြင်း (အမေရိကန်တောင်ပိုင်းနှစ်ခြင်းဂိုဏ်းဝင်) အသင်း တော်က မြန်မာစကားပြောဝတ်ပြုစည်ဝေးကို မိမိတို့ နေရာ မပေးနိုင်တော့ ကြောင်း၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၃၁)ရက်ကို နောက်ဆုံးထား၍ ထွက်ခွါသွားကြရန်၊ သတ် မှတ်ထားသည့် အတိုင်း အနှင်ခံရသော မြန်မာစကားပြော ပရိသတ်ဝင်တို့ဝတ်ပြုရန် နေရာရှာကြရပါတော့သည်။
ဘုရားရှင်သည် မိမိသိုးစုတော်ကို အမြဲတစေ ကြည့် ရှုနေတော်မူသည့် အတိုင်း၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ် ပဌမဦးဆုံးသော တနင်္ဂနွေဖြစ်သည့်ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက် နေ့ တွင်ပင်၊ ကိုယ်တော်အား တဝတ်မျှမပျက်၊ ဆက်လက်ဝတ်ပြုရန် နေရာကို ပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါသည်။ ရရှိသောနေရာသစ်ကား၊ ဘန်ကောက်မြို့ ၊ ဆာထောင်းလမ်း ရှိ YMCA အဆောက်အဦးတွင်ရှိသော ခန်းမဆောင်ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်ကကဲ့ သို့ကရာနီအသင်းတော်၏ အတောင်တော်အောက်တွင် မဟုတ်တော့ဘဲ၊ အများရည် ညွှန်းနိုင်ဘွယ် အမည်ရှိရမည်ကား "ဘန်ကောက်ခရစ်ယာန်မိဿဟာယ" ဟူ၍ ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်၏ ကနဦး တနင်္ဂနွေနေ့ တွင် ပွဲတော်ဝတ်ကို လည်း ဆင်ယင်ကျင်းပကြရာ၊ ပွဲတော်ကို သိက္ခာတော်ရ ဆရာဝေးနိုင်ရန် CCT ထိုင်းအသင်းတော်မကြီးမှ ဆရာတော်စောမ်ချဒ် ကိုဘိတ်ခေါ်လျက် လစဉ်ပြုမြဲ ပွဲတော် ကို ဆင်နွှဲပါဝင်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုမျှမက မြန်မာစကားသုံးအသင်းတော်တွင် လာရောက်အမှုတော်ဆောင်ရန် ဘိတ်ကြားမည့် ဆရာတော်နေထိုင်ရန်၎င်း၊ အသင်း တော်ရုံးခန်းလဲ ရှိနိုင်ရန်၎င်း၊ ဂေဟာတခုကို စတင်ငှါးရမ်းခွင့် ဘုရားရှင်ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပါသည်။ ၎င်းဂေဟာကို ယခုတိုင် အမှုတော်ဆောင်၏ ဂေဟာနှင့်ရုံးခန်းအဖြစ် သုံး စွဲလျက်ရှိပါသည်။
သီးသန့် တည်ရှိရမည့် အသင်းတော်ကိစ္စများကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရန် အမှုဆောင်အစည်းအဝေးကိုလည်း၊ ၎င်းနှစ်ဆန်း ဒုတိယတနင်္ဂနွေနေ့ တွင် စတင် ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။ နှစ်ရှည်လများ မဆိုင်းရဘဲ ရန်ကုန်မြို့ကံဘဲ့နှစ်ခြင်းအသင်းတော် နှင့် ညှိနှိုင်းသဘောတူကြသည့်အတိုင်း သိက္ခာတော်ရဆရာ ဦးဇော်မိုင် ရောက် ရှိလာကာ သိုးထိန်းတာဝန်ယူပါတော့သည်။ ဘန်ကောက်ခရစ်ယာန်မိဿဟာယဝင်များမှာ ကရင်၊ ဗမာ၊ ချင်း၊ ကချင်၊ နီပေါလီ စသဖြင့် လူနွယ်စုအမျိုးမျိုးမှပါဝင်ကြရာ၊ ကချင်အမျိုးသားဖြစ်သော ဆရာတော်ဦးဇော်မိုင် ရောက်ရှိလာခြင်းမှာ အဘိုးတန်ကျေးဇူးတော်ကြီးဖြစ်ရပါသည်။ ၎င်းနှစ် ဧပြီလ နွေရာသီကျမ်းစာသင်စခန်းကို ပရမ်ဘူ ရီ ကမ်းခြေတွင်ကျင်းပကြရာ၊ သန့် ရှင်းသော ရက်သတ္တပတ် (အရှင်ဘုရားအသေခံတော်မူရာရက်သတ္တပတ်) နှင့်လည်း ကြုံကြိုက်နေ၍ စခန်းသို့ ခရီးမထွက်ကြခင် ဧပြီ လ (၁၂) ရက်နေ့ ၊ ကြာသာပတေး ညနေတွင် ပွဲတော်ဝတ်ကို YMCA ခန်းမတွင် ဆရာတော်ဦးဇော်မိုင် ဦးဆောင်လျက်၊ ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။ နွေရာသီကျမ်းစာသင် တန်း ကို သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်များနှင့် ဆုံကာကျင်းပရကား၊ အသင်းတော်ဝင်များ စုံညီစွာတက်ရောက်နိုင်ကြပါသည်။ ၎င်းကျမ်းစာစခန်းတွင် နိပေါလီလူမျိုး အနီလ်(Anil) နှင့် နိပေါလိအမျိုးသမီး ဂစ်ဖ် (Gift) တို့ အား နာမတော်၌ ဇနီးမောင်နှံ အဖြစ် အိမ်ထောင်မင်္ဂလာကို ဆရာတော်ဦးဇော်မိုင် ဆင်ယင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းပင်လယ်ကမ်း ခြေစခန်းတွင်ပင် ထမြောက်တော်မူပွဲ အာရုဏ်ဝတ်ပြုစည်းဝေးပြုလုပ်နိုင်ကြရုံမက နာမတော်ကို ဝန်ခံသူများအား နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကို ပင်လယ်လှိုင်းတွေထဲတွင် ပေးနိုင် ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ် မေလ (၂၇) ရက်နေ့ တွင် နှစ်သစ်အတွက် ရွေးကောက်ခံကြရသော အသင်းတော်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဝင်သစ်များကို ဆက်ကပ်ခဲ့ကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အသင်းတော်များအား အာရုံပြုလေ့ရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကနဦး ပြောင်းလဲခဲ့သူများဖြစ်သော ဦးနော၊ အမျိုးသမီး ဒေါ်မင်းလေး တို့ ကို အောက်မေ့ရာနေ့များ၊ မွေးနေ့ တော်ပွဲ တို့ ကိုလဲ အမှတ်တရကျင်းပနိုင်ခဲ့ ကြပါသည်။ ၎င်းနှစ် စက်တင်ဘာလဆန်း (၂) ရက်နေ့ တွင် ရှမ်းပြည်နယ်မှ ကိုစိုင်းအား နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးနိုင် ခဲ့ကြပါသည်။ သိုးထိန်းတာဝန်ကို ကံဘဲ့အသင်းတော်နှင့် နားလည်မှုယူကာ ဆရာတော်ဦးဇော်မိုင် ခေတ္တလာရောက် အမှုတော်ဆောင်ပေးရသည့်ခွင့်ပြုကာလကုန်ဆုံး သွား၍ ဆရာတော်အား နှုတ်ဆက်ပွဲတော် ဆင်ယင်ပေးခဲ့ကြရပါသည်။ YMCA အဆောက်အဦးကို ဘဏ်မှသိမ်းပိုက်လိုက်သဖြင့် ဘန်ကောက်ခရစ်ယာန် မိဿဟာယ သည် YWCA သို့ ချဉ်းကပ်၍ ရရှိသောခန်းမ၌ ဇွန်လ (၃) ရက်နေ့ တွင် ပြောင်းရွှေ့ ဝတ်ပြုကြရပြန်ပါသည်။ YWCA ၏တာဝန်ဆောင်ညွှန်မှူးသည် ထိုင်းနိုင်ငံ နှစ်ခြင်း အသင်းတော် ထုံးတမ်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရကား ထိုအမျိုးသမီးကြီး၏ အကူအညီဖြင့် ဝတ်ပြုရန် ခန်းမနေရာကို ရခဲ့ကြပါသည်။
၂၀၀၂ ခုနှစ် နှစ်သစ်ကူး ကြိုဝတ်ပြုမှုကို အထပ်အများအပြားရှိ Highway Inn တွင်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတည်းခိုခန်းကို ပိုင်ဆိုင်သူမှာ၊ ဝိညာဉ်ခွန် အား ထက်သန်သူ မိသားစုပိုင်ဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းနှစ် ဇန္နဝါရီလ (၃၁) ရက်တွင်၊ ထိုင်းအသင်းတော်မကြီး၏ သာသနာနယ်အမှတ်(၁၉)၏ စည်းဝေး ကြီးတွင် ဘန်ကောက်ခရစ်ယာန်မိဿဟာယအား တရားဝင်အသင်းတော်တပါးအဖြစ် လက်ခံရန် မေတ္တာရပ်ခံလွှာကို တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
ဆရာတော်ဦးဇော်မိုင်နေရာတွင် ဆရာတော်ဦးလင်းစိန် လာရောက်ခါ နှစ်လခွဲမျှ သိုးထိန်းတာဝန်ယူသွားပါသည်။ ထမြောက်တော်မူရာပွဲနေ့ ဝတ်ပြု ရန် ၎င်းနှစ်မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့အာရုဏ်တက်ချိန်တွင် အသင်းတော်ဝင်များ စုရုံးကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဧပြီလ သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်များဖြစ်သော လဆန်း (၁၂ မှ ၁၅ ရက်) တို့ တွင် ဗန်ချန်ကမ်းခြေ YMCA စခန်းတွင် အသင်းတော်၏ နွေရာသီကျမ်းစာသင်တန်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ နာမတော်ကို ဝန်ခံသည့် ရှမ်းပြည်နယ်မှ ကိုစိုင်းအား နှစ်ခြင်း မင်္ဂလာကို ပေးခဲ့ပါသည်။ သိုးထိန်းတာဝန်ကို ဂျွန်လတွင် ဆရာတော်စောမက်သယူးအေး လာရောက်တာဝန်ယူကာ အမှုတော်ဆောင်ပါသည်။ ဓမ္မဒေသနာကို လည်း အသင်းတော်ဝင် သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်များမှ ဝိုင်းဝန်းဟောကြားနှိုးဆော်လေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ဇူလိုင်လ (၂၄) နှင့် သြဂုတ်လ (၁၁) ရက်တို့ သည် အသင်းတော်အတွက် အ ရေးပါသောနေ့ များအဖြစ် မှတ်သားရပါမည်။ အကြောင်းမှာ ဇူလိုင်လ (၂၄) ရက်နေ့ ၌ ကျောင်းသားရိပ်သာတွင် ဆုတောင်းရာနေ့ ဟု သတ်မှတ်ပြီး၊ အသင်းတော် ပီပြင် ဖြစ်လာရေးအတွက် အမည်နာမကို ဆုတောင်းရှာဖွေရာနေ့ဖြစ်ပါသည်။ ဝိညာဉ်တော်နှိုးဆော်ခြင်းဖြင့် ဒေါ်မိုရင်းချိန် ရရှိသော "ဘန်ကောက်ခရစ်တော် အသင်းတော်" ဟူသောနာမကို ၎င်းလ သြဂုတ် (၁၁) ရက်နေ့ ၌ ကျင်းပသောအလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြရာ အားလုံးသဘော တူ လက်ခံခဲ့ကြပါသည်။
ဝတ်ပြုရာနေရာများ အဆင့်ဆင့်ရရှိခြင်း၊ အမှုတော်ဆောင်ဂေဟာနှင့် ရုံးခန်းငှါးရမ်းရခြင်း၊ ဆက်ကပ်သော ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်များ လာရောက် ဦး ဆောင်ပေးခြင်း၊ နွေရာသီကျမ်းစာသင်တန်း စခန်းများ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ အသင်းတော်တွင်းတာဝန်များဖြစ်သော နာမတော်ဝန်ခံသူများအား နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာ ပေးခြင်း၊ ထိမ်းမြားပေးခြင်း၊ အသင်းတော်အမည်ရရှိခြင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံအသင်းတော်မကြီးတွင် တရားဝင် အဖွဲ့ ဝင်အဖြစ် သိမှတ်မှုရရန် စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း စသည်တို့ ဖြင့် ကောင်းချီးမင်္ဂလာတော်များကို ခံစားရကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
(Bangkok Christ Church)
" သြဂုတ်လ (၁၁) ရက် ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ ယနေ့ ထိ"
ဧဖက် ၄း၎-၆
ကိုယ်တကိုယ် ဝိညာဉ်တဝိညာဉ်တည်းရှိ၏။ သခင်တပါး၊ ယုံကြည်ခြင်းတပါး၊
ဗတ္တိဇံတပါး၊ ခပ်သိမ်းသောငါတို့ ၏ အဘဖြစ်သောဘုရားသခင်တဆူတည်း ဖြစ်တော်မူ၏။
ထိုဘုရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းသောငါတို့ ၏ အပေါ်မှာ ရှိတော်မူ၏...
ဘန်ကောက်ခရစ်ယာန်မိဿဟာယအား (Bangkok Christian Fellowship) မှ ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော် (Bangkok Christ Church) အဖြစ်သို့သြဂုတ်လ (၁၁) ရက် ၂၀၀၂ နေ့ မှစ၍ ကူးပြောင်းလာခဲ့ပါသည်။ ယုံကြည်သူတစု၊ အဖွဲ့ ငယ်တစ်ခုမှ စတင်လာရာမှ တဖြည်းဖြည်းအတူတကွ ဝတ်ပြုလာသူ များလာသည်ကတကြောင်း၊ ဘန်ကောက်မြို့ မှာ အသင်းတော်တပါးအဖြစ်ရပ်တည်ရန် အချိန်ကျရောက်လာသည်တကြောင်းတို့ ကြောင့် အသင်းလူကြီးများက ဆွေး နွေးတိုင်ပင်ကြရာ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်ရန် အရေးကြီးကြောင်းသိသဖြင့် အားလုံးစုပေါင်း၍ ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုရန် သဘောတူကြပါသည်။ ထိုအတွက် ကြောင့် ဇူလိုင်လ (၂၄) ရက် ၂၀၀၂ နေ့ တွင် ကျောင်းသားခရစ်ယာန်ရိပ်သာ Student Christian Centre ၏ ဝတ်ပြုခန်းမတွင် ယာယီအမှုတော်ဆောင် သိက္ခာတော်ရ ဆရာစောမက်သယူးအေး ဦးဆောင်လျက် အသင်းလူကြီးများ၊ အသင်းသားများ ပါဝင်သောအဖွဲ့ တဖွဲ့ သည် အသင်းတော်ကိစ္စအတွက် နေ့ ဝက်တာ အစာရှောင် ဆု တောင်းခြင်းဝတ်ကို ပြုကြပါသည်။
ဤကဲ့သို့ ဆုတောင်းပြီးနောက် သြဂုတ်လ (၁၁) ရက် ၂၀၀၂ နေ့ တွင် ပြုလုပ်သော အသင်းတော်အမှုဆောင်အဖွဲ့ စည်းဝေးတွင် အသင်းတော်တပါး အဖြစ်သို့ကူးပြောင်းရန်နှင့် အသင်းတော်အမည်ကိစ္စကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြပါသည်။ ထိုစည်းဝေးတွင် ဒေါ်မိုရင်းချိန်မှ ဆက်လက်၍ အသင်းတော်အမည်နှင့် ပတ်သက် ၍ မိမိအာရုံ၌ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ပေါ်လာသည်မှာ "ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော်" ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ အသင်းတော်အမည်ကို ထိုသို့ ခေါ် ဝေါ်ရန် ဒေါ်မိုရင်းချိန်၏ အဆိုပြုချက်ကို ဒေါ်ဖေါလာမှ ထောက်ခံခဲ့သည်အတိုင်း အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ဘခမ ၄၃/၂၀၀၂ ကို အားလုံးသဘောတူ အတည် ပြုကြပါ သည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် ထိုနေ့ မှစ၍ အသင်းတော်၏အမည်မှာ ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော် (Bangkok Christ Church) ဖြစ်လာပါသည်။ အသင်းတော်၏ အမည်သစ်ကို အသင်းသားများအား စက်တင်ဘာ (၈) ရက်နေ့ တွင် တင်ပြ၍ လက်ခံခြင်းကို ရယူပြီးနောက် အသင်းတော်အမည်သစ်ကို ကမည်းတင် ဆက်ကပ် ဝတ်ပြု ခြင်းကို စက်တင်ဘာလ (၁၅) ရက် ၂၀၀၂ နေ့ တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အသင်းတော်နေ့(Church Day)
ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော်၏ ဇန္နဝါရီလ (၁၂) ရက် ၂၀၀၃ နေ့ တွင် ပြုလုပ်သော အလုပ်အမှုဆောင်စည်းဝေး၏ ဘခသ၁၅/၂၀၀၃(က)ဆုံးဖြတ်ချက်အရ	"ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော်နေ့ ဟု စက်တင်ဘာလ ဒုတိယဝတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ကို သတ်မှတ်ရန်" မှတ်တမ်းတင်ရေးသားထားပါသည်။ ထို့ ကြောင့် အသင်းတော်နေ့ (Church Day) ကို စက်တင်ဘာ ဒုတိယပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ တွင် နှစ်စဉ်ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်းဝတ်ကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးဆုံး အသင်းတော်နေ့ ကို စက်တင်ဘာ (၁၄) ရက် ၂၀၀၃ ခုနှစ်နေ့ တွင် YWCA တွင် ကျင်းပခဲ့ ပါသည်။ ထိုနှစ်တွင် သိက္ခာတော်ရဆရာတော် စောမက်သယူးအေးမှ "ခါးသီးခြင်း မှ ချိုမြိန်ခြင်းသို့ " ဒေသနာကို ဟောကြားခဲ့ ပါသည်။ ထိုဝတ်ပြုစည်းဝေးတွင် တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး မဒေါနီက သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
The Church of Christ in Thailand (CCT) အဖွဲ့ ဝင်အသင်းတော်ဝတ်ပြုစည်းဝေးသို့ 
တက်ရောက်လာသော (CCT) မှ ခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ အမှတ်တရ
(CCT) အဖွဲ့ ဝင်များနှင့် အသင်းခေါင်းဆောင်များ
ဇန္နဝါရီလ (၁၂) ရက်၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ်နေ့ တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော အလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးတွင် အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချုက်တခုကို အတည် ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာဦးကျော်သန်း စတင်၍ ဆက်သွယ်ထားသော ဇင်းမယ် (Chiang Mai) ရှိ The Church of Christ in Thailand (CCT) ၏ Pak (XIX) အလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးသို့ဒု-ဥက္ကဌ ဦးအောင်မြချိန် နှင့် ယာယီအမှုတော်ဆောင် သိက္ခာတော်ရ ဆရာတော်စောမက်သယူးအေး တို့ က ဘန်ကောက် ခရစ်တော်အသင်းတော်ကို တရားဝင်သိမှတ်ပြုရေးအတွက် သွားရောက်တင်ပြကြရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ထိုပုဂ္ဂိုလ် (၂) ဦး Chiang Mai တွင်ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးကို ဇန္နဝါရီလ (၃၁) ရက်တွင် တက်ရောက်ကြပါသည်။ ထိုစည်းဝေး၌ ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော် (Bangkok Christ Church) ကို အဖွဲ့ ဝင် အသင်းတော်တပါးအဖြစ် အတည်ပြုခြင်းကို ရရှိပါသည်။
The Church of Christ in Thailand (CCT) အဖွဲ့ ဝင်အသင်းတော်တပါးဖြစ်ခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းပေါ်လွင်စေရန် CCT ၏သဘာပတိ Dr. Boonrad, အခြား ဆရာတော်တပါးတို့ နှင့် PAK (XIX) မှ Rev. Sunny, Rev. Sung Thong နှင့် အဖွဲ့ ဝင်များသည် ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော်၏ သြဂုတ်လ (၃)ရက် ၂၀၀၃ ခုနှစ်နေ့ တွင် ဝတ်ပြုစည်းဝေး နှင့် ပွဲတော်မင်္ဂလာဝတ်တွင် ပါဝင်ကြပါသည်။ ဘုရားသခင်ပို့ ဆောင်တော်မူ၍ ထိုနေ့ ဝတ်ပြုခြင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆရာတော် ပီတာ ဂျိုးဇက်၊ ဆရာတော်စောတင်ဦး၊ ဆရာတော် Dr. မောင်မောင်ရင် စသည်တို့ လည်း ရောက်ရှိတက်ရောက်ကြပါသည်။
သိက္ခာတော်ရဆရာတော်စောမက်သယူးအေး၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၁) ရက်၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်နေ့ တွင် ပြန်သွားပြီးနှစ်ရက်အကြာ၌ အသင်းတော်၏ ပထမဦးဆုံး အ ချိန်ပြည့်ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်သိက္ခာတော်ရဆရာမန်းစေးလာ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၃) ရက် တွင်ရောက်ရှိလာပါသည်။ အဖသင်းအုပ်ဆရာသည် ဘုရားရှင်၏အလိုတော် ဟူသော အဓိကအချက်ဖြင့် ပထမဆုံးသော ဓမ္မဒေသနာကို ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၅) ရက်နေ့ တွင် ဟောကြားခဲ့ပါသည်။
ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော်၏ ဒုတိယအကြိမ်အသင်းတော်နေ့ (Church Day) ကို စက်တင်ဘာလ (၁၂) ရက်၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်နေ့ တွင် YWCA ခန်းမ တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထိုအသင်းတော်နေ့ ဝတ်ပြုခြင်းအစီအစဉ်တွင် သင်းအုပ်ဆရာသိက္ခာတော်ရ ဆရာမန်းစေးလာမှ "ကျောက်ထက်အသင်းတော်" ဓမ္မဒေသနာကို ဟောကြားခဲ့ပြီး၊ အသင်းတော်ဥက္ကဌ ဦးအောင်မြချိန်မှ သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော်၌ ဝတ်ပြုသူများလာသဖြင့် ဝတ်ပြုနေသော YWCA ခန်းမတွင် နေရာထိုင်ခင်း အခက်အခဲနှင့် ကြုံတွေ့ ရပါသည်။ ထို အတွက်ကြောင့် ပိုမိုကျယ်ဝန်းပြီး၊ သွားလာရေးအဆင်ပြေသောနေရာသစ်ကိုရှာရန် အများသဘောတူကြပါသည်။ အသင်းတော်နာယကဒေါက်တာဦးကျော်သန်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံခရစ်တော်အသင်းတော် CCT ၏ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရာမှ CCT အဆောက်အဦးသစ်တွင် လစ်လပ်နေသောနေရာထိုင်ခင်းများရှိကြောင်းသိခဲ့ ရပါသည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် အသင်းတော်၏နာယက၊ သင်းအုပ်ဆရာ၊ ဥက္ကဌ နှင့် ဒုဥက္ကဌ ပါဝင်သောအဖွဲ့ သည် CCT အဆောက်အဦးသို့ သွားပြီး တာဝန်ခံတဦးဖြစ် သော Khun Ravee Boayen အား၊ သွားရောက်တွေ့ ဆုံကာ၊ ငှါးရမ်းရန်ကိစ္စကို အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနောက် အသင်းတော်၏အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ သို့ပြန် လည်တင်ပြခဲ့ပါသည်။ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ က CCT အဆောက်အဦးသို့ ပြောင်းရွှေ့ ဝတ်ပြုရန် သတောတူပြီး၊ ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော်သည် YWCA ခန်းမကို ၂၀၀၁ ခု မေလ ပထမပတ်မှစတင်၍ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဧပြီလ နောက်ဆုံးပတ်ထိ (၅)နှစ်တိုင်တိုင် ဝတ်ပြုခြင်း အစီအစဉ်များကို သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။
ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော်သည် မေလ (၇) ရက် ၂၀၀၆ ခုနှစ်နေ့ တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ခရစ်တော်အသင်းတော် (CCT) ၏ အဆောက်အဦးသစ်ရှိ ပဉ္စမ ထပ်တွင် ပထမဦးဆုံးစတင် ဝတ်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ ထိုနေ့ ဝတ်ပြုခြင်း အစီအစဉ်တွင် အသင်းတော်နာယက ဒေါက်တာဦးကျော်သန်းက "ဗေသလ နှင့် ဝေနွေလ" ဓမ္မဒေ သနာကို ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ CCT အဆောက်အဦးရှိ ဝတ်ပြုခန်းမသည် ယခင်နေရာထက် ပိုမိုကျယ်ဝန်းပြီး၊ ခန်းနားတင့်တယ်လှပါသည်။ ဝတ်ပြုခန်းမ နှင့် မိဿဟာ ယ ဖွဲ့ ရန်နေရာတို့ ရှိပြီး၊ အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ကျေးဇူးတော်ကြီးမားလှပါသည်တကားဟု ဝန်ခံကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း ၂၅း၂၁
အရှင်ကလည်း သာဓုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်း၊ သင်သည် အမှုငယ်၌ သစ္စာစောင့်လေပြီ။
များစွာသော အမှုအခွင့်ကို သင်၌ငါအပ်ပေးမည်။
သင်၏သခင်နှင့်အတူ စည်းစိမ်ကို ဝင်စားလော့ဟု မိန့် တော်မူ၏။...
ဘန်ကောက်ခရစ်ယာန်မိဿဟာယ (Bangkok Christian Fellowship) အနေဖြင့်စတင်ခဲ့သော ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော် (Bangkok Christ Church)သည် စတင်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ချိန်၌ ဓမ္မအမှုတော်ဆောင် မရှိခဲ့ပါ။ ပထမဦးဆုံးသော ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း အစီအစဉ်ကို ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် YMCA ခန်း မတခုတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဓမ္မဒေသနာကို သိက္ခာတော်ရဆရာမင်းထွန်းသိန်းမှ ဟောကြားပြီး ပွဲတော်ကို Second Church မှ သင်းအုပ်ဆရာ တော်ဒေါက်တာ စောမ်ချဒ် က ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။
(ဆရာတော် ဒေါက်တာ စောမ်ချဒ် ၇ - ၁ - ၂၀၀၁)
အသင်းတော်သို့အချိန်ပြည့်ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်အဖြစ် ဦးဆုံးရောက်ရှိလာသူမှာ ကန်ဘဲ့နှစ်ခြင်းအသင်းတော်မှ သင်းအုပ်ဆရာ သိက္ခာတော်ရ ဦးဇော်မိုင် ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော်သည် ကန်ဘဲ့နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၏ ကူညီခြင်းနှင့် ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် လာရောက်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော် ဦးဇော်မိုင် သည်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၂) ရက် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ရောက်ရှိလာပြီး၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၄) ရက်တွင် ပြုလုပ်သော ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း အစီအစဉ်တွင် စတင်ဦးဆောင်ပြီး ပွဲတော်ပေးခဲ့ပါ သည်။
(သိက္ခာတော်ရ ဦးဇော်မိုင် ၂ - ၂ - ၂၀၀၁ မှ ၂ - ၉ - ၂၀၀၁ ထိ)
ဘန်ကောက်ခရစ်ယာန်မိဿဟာယသည် ဆရာတော်ဦးဇော်မိုင် ဦးဆောင်လျက် Pranburi ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင် နွေရာသီသမ္မာကျမ်းစာ စခန်းချသင်တန်း (Summer Bible Camp) ကို ဧပြီလ (၁၃) ရက်မှ (၁၅) ရက်ထိပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မေလ ပထမအပတ် တနင်္ဂနွေ၌ YMCA မှ YWCA သို့ ပြောင်းရွေှ့၍ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခဲ့ ကြပါသည်။ သိက္ခာတော်ရ ဦးဇော်မိုင်သည် စက်တင်ဘာ (၂) ရက်နေ့ တွင် နိဂုံးဝတ်ပြုခြင်းနှင့် ပွဲတော်ကို စီစဉ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် ရန်ကုန်သို့ ပြန်သွားခဲ့ပါသည်။
(ဆရာဦးလင်းစိန် ၁၂ - ၁ - ၂၀၀၂ မှ ၃ - ၃ - ၂၀၀၂ ထိ)
ဆရာဦးလင်းစိန် ပြန်သွားပြီးနောက် ဇွန်လ (၁) ရက်၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် သိက္ခာတော်ရဆရာတော် စောမက်သယူးအေး ရောက်ရှိလာပြီး၊ အောက်တိုဘာလ အထိ ယာယီအမှုတော်ဆောင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနောက် ရန်ကုန်သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွါသွားပါသည်။
(သိက္ခာတော်ရဆရာစောမက်သယူးအေး ၁ - ၆ - ၂၀၀၂ မှ ၁၁ - ၂ - ၂၀၀၄ ထိ)
သိက္ခာတော်ရဆရာတော်စောမက်သယူးအေးသည် ဒီဇင်လာ (၁၅) ရက်၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်ရောက်လာပြီး၊ ယာယီဓမ္မအမှုတော် ဆောင် အဖြစ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၂၀၀၃ ခု ဇန္နဝါရီလကုန်ပိုင်းတွင်ပြုလုပ်သော ဒေသ (၁၉) Pak (XIX) အလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးသို့အသင်း တော် ဒုဥက္ကဌ နှင့် အတူတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ CCT ၏အဖွဲ့ ဝင်အသင်းတော်တပါးဖြစ်ရေးကိစ္စကို ထိုအစည်းအဝေး၌ပင် ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော် (Bangkok Christ Church) အား အဖွဲ့ ဝင်အသင်းတော်တပါးအဖြစ် Pak (XIX) အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ မှ လက်ခံအတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၃ ခု သြဂုတ်လ (၃) ရက် နေ့ တွင်၊ Pak (XIX) မှ ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော်ကို အသင်းဝင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသော အထူးကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်း အစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၌ CCT ၏ သဘာပတိ နှင့် Pak (XIX) မှခေါင်းဆောင် ဆရာတော်များ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။
စက်တင်ဘာ (၁၄) ရက်၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် အသင်းတော်၏ ပထမအကြိမ်အသင်းတော်နေ့(Church Day) ကိုကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်းတွင် သိက္ခာတော်ရဆရာတော်စောမက်သယူးအေးမှ "ခါးသီးခြင်းမှ ချိုမြိန်ခြင်းသို့ " ဓမ္မဒေသနာကို ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၁) ရက် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်သို့ပြန်လည်ထွက်ခွါသွားပါသည်၊
(သိက္ခာတော်ရဆရာမန်းစေးလာ ၁၃ - ၂ - ၂၀၀၄ မှ ယနေ့ ထိ)
ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော် (Bangkok Christ Church) ၏ ပထမဦးဆုံးအချိန်ပြည့် ဓမ္မအမှုတော်ဆောင် သိက္ခာတော်ရဆရာမန်းစေးလာသည် ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၃) ရက် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ရောက်ရှိလာပြီး စတင်အမှုတော်ထမ်းဆောင်ပါသည်။ အသင်းတော်၏ ဒုတိယ၊ တတိယ နှင့် စတုတ္ထအကြိမ် အသင်းတော်နေ့များကို ဦးဆောင်၍ ဓမ္မဒေသနာများကို ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၆ ခု၊ ဇွန်လမှစ၍ ဆရာတော်သည် The Church of Christ in Thailand (CCT) ၏ အမှုတော် ဆောင်တပါးအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရပြီး၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အမှုတော်ဆောင်လျက် နေခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။
ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော်သည် မေလ (၇) ရက်၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် YWCA မှ CCT အဆောက်အဦးသို့ ပြောင်းရွှေ့ ပြီး ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြပါသည်။ စက်တင်ဘာလ (၁၀) ရက်၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်သော စတုတ္ထအကြိမ် အသင်းတော်နေ့(Church Day) ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်တွင် Christian Musicians' Fellowship (CMF) သည်လည်းပါဝင်ပြီး ဧည့်သည်တော်များကို ဖိတ်ကြားလျက် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။ သိက္ခာတော်ရဆရာမန်းစေးလာသည် ယနေ့ တိုင် အသင်းတော်၏ အချိန်ပြည့်ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
ဆာလံ ၉၅း၂ ~ ၃
ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက် ရှေ့တော်သို့ ဝင်၍ ဆာလံသီချင်းဆိုလျက် ကျူးဧသောအသံကိုပြုကြကုန်အံ့၊ ထာဝရဘုရားသည် ကြီးမြတ်သော ဘုရား၊ ဘုရားတကာတို့ ထက် ကြီးမြတ်သော ဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏။
"ဘုရားပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားကို ပြပ်ဝတ်ကိုးကွယ်ကြလော့" ဟု ဆာလံ ၉၇း၇ မှာ ပြောထားသည့်အတိုင်း၊ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ထိုက်တော်မူသော ထာဝရဘုရားကို နေရာ ထိုင်ခင်းပြောင်းရွှေ့ရခြင်းမှတပါး၊ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာ တနင်္ဂနွေ တပတ်မပျက်၊ ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော်သည် အစဉ်အဆက် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်ခဲ့ခြင်းအ တွက် ကျေးဇူးတော်အလွန်ကြီးမားကြောင်း ဝန်ခံပါသည်။
ဘန်ကောက်ခရစ်ယာန်မိဿဟာယ အနေဖြင့် YMCA ခန်းမတွင် ၂၀၀၁ ခုနှစ် ဇန္နဝါရီလမှ ဧပြီလကုန်အထိ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကို၎င်း၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ် မေလ မှစ၍ YWCA ခန်းမတွင် ဆက်လက်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာ "ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော်" အမည်ဖြင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဧပြီလကုန်အထိ (၅) နှစ်တိတိ ဝတ်ပြုကိုးကွယ် ခြင်းကို၎င်း၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ် မေလမှစ၍ "ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော်" ပါဝင်သည့် သာသနာအဖွဲ့ ချုပ် Pak (XIX) ၏ "အသင်းချုပ်ကြီး" ဖြစ်သော CCT ဌါနချုပ်၏ တင့်တယ်လှပ ကျက်သရေ မင်္ဂလာ နှင့် ပြည့်ဝသော လက်ဝါးကပ်တိုင်တော် ဦးထိပ်ပန်ဆင်သည့် (၁၅) ထပ်၊ သာသနာအဆောက်အဦးကြီးတွင် ဆက်လက်ဝတ်ပြုကိုး ကွယ်လျက်ရှိပါသည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ် YMCA နေရာမှစ၍ YWCA သို့ ရောက်ရှိပြီး၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းအထိ၊ အသင်းတော်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းစည်းဝေးကို နံနက်စောစော ပိုင်း (၈း၃၀ ~ ၁၀း၁၅) မှာပြုလုပ်ပြီး၊ အမျိုးသမီးကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်း နှင့် လူငယ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကို တစ်လှည့်စီ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ် နှစ်လည်ပိုင်းမှစပြီး၊ အမျိုးသမီး / လူငယ် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကို ကြိုတင်းပြုလုပ်ပြီး၊ အသင်းတော်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကို နောက်ပိုင်းမှ ပြု လုပ်ရာ အဖက်ဖက်မှအစဉ်ပြေကာ ပိုမိုထိရောက်မှုရှိကြောင်း တွေ့ လာရပါသည်။ သို့ ဖြစ်ပါ၍ ဝတ်ပြုရာအချိန်မှာ -
နံနက် ၉း၀၀ ~ ၁၀း၀၀ နာရီ၊ အမျိုးသမီး / လူငယ် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၊
နံနက် ၁၀း၀၀ ~ ၁၀း၃၀ နာရီ၊ သီဆိုချီးမွမ်း ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၊
နံနက် ၁၀း၃၀ ~ ၁၂း၀၀ နာရီ၊ အသင်းတော် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၊
နံနက် ၁၀း၃၀ ~ ၁၂း၀၀ နာရီ၊ ကလေးသူငယ်များ ဓမ္မပညာအစီအစဉ်။
အစီအစဉ်များကို "တရားပလ္လင်ကော်မီတီ" မှတာဝန်ယူပြီး၊ (၆) လ အစီအစဉ်ကို ကြိုတင်ရေးဆွဲကာ၊ အပတ်စဉ်၊ သဘာပတိ၊ ဓမ္မဒေသနာ၊ ဆုတောင်း၊ ကျမ်းစာဖတ်၊ အတုံ့ အပြန်ဖတ် စသည်ဖြင့် အသင်းသား/သူ များကို တာဝန်ချမှတ်ကာ၊ ကြိုတင်းအကြောင်းစာများပေးပို့ ပါသည်။ အပြောင်းအလဲများတို့ ကိုလည်း အဆင်ပြေစေရန်၊ သင်းအုပ်ဆရာမှ တာဝန်ယူပြီး၊ တရားပလ္လင် နှင့် ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်သွားပါသည်။
အစီအစဉ်များတို့ ၌ ပုံမှန် လာရောက် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူများဦးရေမှာ ၉၀ ~ ၁၂၀ ဝန်းကျင်ရှိပြီး၊ ပွဲတော်ဝတ်ရှိသည့်အချိန်၌ ၁၂၀ ~ ၁၅၀ ခန့် ရှိပါသည်။ ဘုရားရှင်ပို့ ဆောင်တော်မူ၍ ရောက်ရှိလာသော ဧည့်သည်အမှုတော်ဆောင် လုပ်ဖေါ်ဆောင်ဖက်များတို့ ကို နေရာပေးခြင်းအလေ့ပြုလေ့ရှိပါသည်။
ကျေးဇူးတော်ကြောင့် မြန်မာပြည်နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ်မှ အမှုတော်ဆောင်များ၊ မြန်မာပြည်အသင်းတော်များကောင်စီ (ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ) မှ အမှုတော်ဆောင် များ၊ လူမျိုးစု နှင့် ဒေသန္တရအဖွဲ့ ချုပ်များမှ အမှုတော်ဆောင်များနှင့်တကွ အခြားဧဝံဂေလိ အမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့ အစည်းများမှ လုပ်ဖေါ်ဆောင်ဖက် များသာမက၊ တိုင်းတပါး၌ သွားရောက်အမှုတော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြသော အမှုတော်ဆောင်များ (စင်္ကပူ၊ မလေးရှား၊ သြစတေးလီးယား၊ USA) စသည်ဖြင့် ပါဝင် ဆက်ကပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ဟေရှာယ ၅၅း၁
ငါ့နှုတ်ကပတ်တော်သည် ... အကျိုးမရှိဘဲ၊ ငါ့ထံသို့မပြန်ရ။ ငါစေခိုင်းသောအမှု၌ အောင်လိမ့်မည်။
(စောညီညီထွန်း နှင့် နော်ဒီဘိုးရာ)
ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အသင်းတော် (Bangkok Christ Church) သည် ထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်း၊ မွေးနေ့ တော်ပွဲ (Christmas) သံလွင်ခက်နေ့(Palm Sunday) နှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူရာနေ့(Easter) များကို နှစ်စဉ်ကျင်းပပါသည်။ ထို့ ပြင် အထူးနေ့ များဟုသတ်မှတ်ပြီး အထူးကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်းများနှင့် အခြားအစီအစဉ်များ ပါပူးတွဲ၍ ပြုလုပ်သောနေ့ ရက်များလည်း ရှိပါသည်။ ထိုနေ့ ရက်များမှာ -
* ၁။ ဖူးဆန်ဖေါ်နေ့ 
၂။ မိခင်များနေ့ 
* ၃။ ဖူးသာဖြူနေ့ 
၄။ ကလေးများနေ့ 
၅။ ဖခင်များနေ့ 
* ၆။ ဦးနောနေ့ 
* ၇။ ယုဒသန်နေ့(Judson Sunday)
၈။ ဒေါ်မင်းလေးနေ့ 
* ၉။ မခမမ နေ့(Blind Sunday)
* ၁၀။ သမ္မာကျမ်းစာနေ့(Bible Sunday)
* ၁၁။ အနာကြီးရောဂါနေ့(Leprosy Sunday)
၁၂။ ဓမ္မတက္ကသိုလ်နေ့(MIT Sunday)
၁၃။ အသင်းတော်နေ့(Church Sunday)
* ၁၄။ ခရစ်ယာန်အိမ်ထောင်ရက်သတ္တပတ် (Christian Home Week)
ဤအထူးနေ့(၁၄) ရက်တို့ ၌ ကြယ်ပွင့်ဖြင့် ညွှန်ပြထားသောနေ့ ရက်များတွင် အထူးအလှူငွေကောက်ခံပြီး၊ မြန်မာပြည်ရှိသက်ဆိုင်သောအဖွဲ့အစည်းသို့ထိုနေ့ တွင်ကောက်ခံရရှိသော အလှူတော်ငွေများကို ပေးပို့ ပါသည်။
မွေးနေ့ တော်ပွဲ နှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူရာနေ့ များတွင် ဓမ္မပြဇာတ်တင်ဆက်ခြင်း နှင့် သံလွင်ခက်နေ့ တွင် ကလေးသူငယ်များပါဝင်သော အစီအစဉ် များ ပါပြုလုပ်ပါသည်။
မွေးနေ့ တော်နေ့ လူငယ်များမှ အကသရုပ်ဖြင့်တင်ဆက်စဉ်f
ထို့ ပြင် အသင်းတော်နေ့ (Church Day) ကို လည်း အထူးအစီအစဉ်အဖြစ် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ နှစ်စဉ် စက်တင်ဘာလ ဒုတိယအပတ်တွင် ပြုလုပ်ပါသည်။ အသင်းတော်နေ့ မတိုင်မီ အကြိုစနေနေ့ များတွင် တေးဂီတနှင့် အဆိုအက အစီအစဉ်များပါတင်ဆက်ပါသည်။ အထူးနေ့ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း အစီအစဉ်များတွင် မြန်မာပြည်မှ သိက္ခာတော်ရဆရာများ လာရောက်၍ ဓမ္မဒေသနာများ ဝေငှခြင်းများရှိပါသည်။ ဤကဲ့သို့ဆရာတော်ကြီးများ လာရောက်၍ ဘန်ကောက်ခရစ်တော်အ သင်းတော်၏ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်အချိန်ယူကြသဖြင့် မြန်မာပြည်ရှိ ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် အခြားအသင်း တော်များပါ ဘန်ကောက် ခရစ်တော်အသင်းတော် (Bangkok Christ Church) နှင့် အမြဲတမ်း အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်လျက်ရှိကြပါသည်။